Rap underground: 20 taona “tao ambany gorodona” i Miora Killah | NewsMada
Rap underground: 20 taona “tao ambany gorodona” i Miora Killah
“Ny ankamaroan’ny olona dia efa zatra nofahanana hiram-pitiavana sy hira madinika ka tsy mazoto hihaino ankoatra ireo nahazatra ny sofiny intsony”, hoy i Miora Killah… Ary raha ny momba ny rap undergroud indray no horesahina, manana ny heviny izy.
Gazety Taratra (*): Ho anao manokana, inona marina no atao hoe “rap underground” (ambany ta­ny, ambany gorodona, sns..)?
Miora Killah(-) : Samy manana ny fandraisany azy ny tsirairay, ary maro ny mandika vilana. Ny tenako dia anisany miangaly azy io, nanomboka ny taona 2000. Ny «underground», manana ny fototra niaingana (Boom bap, G funk, Hard core, acoustique, sns…) mozika somary mavesatra mamoaka ny tena avy ao anaty amin’ny alalan’ny tonony somary mivantana loatra mba tsy hilazana hoe masiaka be. Raha bangoina tsotsotra, mitovy amin’ny gadona rehetra ihany izy io, toy ny hard rock, jazz, sns, saingy hafa ihany ny “kalitao” sy ny “Original”…
* Misy fandaniana ao anatin’ny famoahana sy ny pitsopitson’ny sanganasa iray. Azo eritreretina ve ny hisian’ny tamberim-bidy mba tsy hisian’ny fatiantoka?
-Safidy sy fitiavana ny fironana, raha amiko manokana. Noho izany, tsy ny vola loatra no zava-dehibe fa ny famoahana ilay zavatra avy aty amiko. Na izany aza, azo itadiavam-bola izy io ary hahazoana laza ihany koa. Iza­ny hoe, “vente underground” no ilazana azy, izay efa ataon’ny any ivelany ( Onix, Cypress Hill, Wu Tang…)
* Inona no maha samy hafa ny “rap commercial” sy ny rap underground?
- Ny “rap commercial”, mirona kokoa any amin’ny resaka fitadiavam-bola ny hitondrana azy ka hisintonana olona no tena tanjona. Misy indray ny atao hoe «rap underground», tsy resa-bola loatra no mibahana fa ny hafatra ao anatiny no mila ma­fonjafonja kokoa. Tafidi­tra ao anatin’izany ny resaka “texte”, ny “flow”, ny “ins­tru”, sns.
* Inona ny antony ma­hatonga azy tsy dia hita firy any anaty haino aman-je­ry ?
– Mbola sarotra ho an’ny sarambabembahoaka ny hihaino sy handray azy ka ho lany vola sy ho lany andro eo fotsiny ianao raha tsy ny toe-tsain’ny tsirairay no miova. Matetika mantsy ny tonony ao anatiny mivantambantana, somary masiatsiaka ny fanehoana azy. Misy koa hevitra sarotra takarina toy ny “métaphysique”, ohatra, ary matetika hita taratra eo amin’ny fitafy, feon-kira, “tags”, “dance hip hop”, sns, izany. Ny ankamaroany mihevitra fa jiolahimboto, mpifoka rongony, olona tsiy misy fotony ireo mpiangaly azy ity ka vao mainka anisany sakana ihany koa ny fiheverana tahaka izany.
Nitafa : Narilala
“Misy endrika valo ny rap amin’izao vanim-potoana misy antsika izao”, hoy i Miora Killah :
1- Ny rap conscient : Rap Politique , dénonciateur sady engagé ! Rap ho fampitana hafatra. “Fond” no tena manan-danja be fa tsy ny “for­me” matetika.
2- Ny rap égotrip : Fanaovana “Clash” na “battle” sy “freestyle” no niandohany : Mihan­tsy mpanao rap hafa, ary milaza fa izy no tena tom­pony sy henjana amin’ny Rap Game. Tsy dia ahazoana “carrier” loatra.
3- Ny rap poétique : Endrika mitovy amin’ny poésie , na koa Slam, ny “fond” sy ny “for­me” manan-danja betsaka izay eo ambony feonkira milantolanto matetika.
4- Ny rap gangsta : Tany Amerika no nipoirany, manome vahana kokoa ny lafiny “Bling bling” ,vola, fiara vehivavy sns… Rap capitaliste mifameno amin’ny endrika maha “gangster”.
5- Ny rap hard core : Matetika taingenana eo ambony feonkira “Boom bap”, izay mitodika tanteraka miresaka ny fiarahamonina misy azy, resaka politika, resaka sosialy, herisetra sy hery fahefana hananana…matetika dia mitsikera ny fiarahamonina misy azy sy ny resaka fahantrana, ny “effets negatives”…
6- Ny rap commercial : Rap manaraka toetr’andro manara-damaody, izay heno matetika eny amin’ny haino aman-jery, natao ho an’ny sarambabembahoaka, matetika atao matraquage.
7- Ny rap métaphysique : Rap philosophie , miresaka ny zavatra tsy hita maso sy tsy azo tsapain-tanana anefa misy no tena mibahana.
8- Ny rap évangélique : gospel hip hop na holy hip hop izay mitodika tanteraka any amin’ Andriamanitra ny zavatra resahana ao anatiny.